ယွန်း: ကြုံရဆုံရ ပရလောက
စာရေးသူ ယွန်း မှ 5:52 PM
အဟေး ယွန်းမ နင်ကို ချစ်လို့ လာမခြောက်တာနေမှာပေါ့ ဟဟး)
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မနေ့ကတောင်မှ ဘာရယ် မဟုတ် ရောက်သေးတယ်ဗျာ။ ဟိုတလောက နေမကောင်းဘူး ဆိုတော့ နေကောင်းသွားပြီလားလို့ပါ။ အခုလို စာတွေ ဆက်ရေးမယ် ဆိုတော့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
အတိုက်အခိုက်ကြောင့် ရှိနေတဲ့ သရဲက ရိုးရိုးသရဲထက် ဆိုးတယ် လို့ ကြားဖူးတယ်။ သူတို့က ခြေချုပ်မိနေတာကိုး။ သူတို့လည်း သွားချင်ပေမဲ့ သွားမရဘူးလေ။ ဒီလို လုပ်လိုက်လို့ အဆင်ပြေသွားတာ တော်သေးတာပေါ့ဗျာ။ အခုမှတော့ ဘာမှ စိတ်ထဲ ဖြစ်မနေပါနဲ့။ အားလုံးကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးပြီပဲ။
Gotalittle bit scared but thank you and keep blogging!!!
အဲဒီအိမ်ကြီးမှာ ယွန်းတို့တွေ ဆက်ပြီးနေရဲတာကို ချီးကျူးမိတယ်။ :)
အဲဒီလို အင်းပြားတွေနဲ့လုပ်တတ်တယ် ဘာညာဆိုတာတွေ ကြားတော့ကြားဖူးတယ်။ တကယ်ရှိတာကိုးးးးးးး။
ဒါနဲ့ ယွန်းရော နေကောင်းရဲ့လား???
သတိရနေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးက အဓိကပါ။ ဂရုစိုက်နော်....ယွန်း...။
ယွန်း မေမေက သတ္တိကောင်းလိုက်တာ .. ကိုယ်သာဆိုပြေးပြီပဲ .. ;)
အဲလိုမျိုး အင်း တွေ့ဖူးတယ်..
ခက်တော့တာပဲ.. လူတွေများ အောက်တန်းကျလို့ အောက်လမ်းနည်းကို သုံးသလားပဲ။
အစ်မကို မခြောက်တာက သရဲက အစ်မကို ရှိန်တယ် ဖြစ်မှာပေါ့။
အင်း ..အဲဒါတွေကလည်း တကယ်ရှိသဗျ။ လုပ်တဲ့လူတွေကလည်း ခက်ပါတယ်။ အချင်းချင်း သတ္တိရှိရှိယှဉ်ပြိုင်မယ်မရှိဘူး။ မကောင်းတဲ့ နည်းလမ်း တယ်သုံးကြသကိုး။ တော်သေးတာပေါ့။ မြန်မြန်ဆန်ဆန် အဆင်ပြေသွားလို့။
အတိုက်အခိုက်အင်းတွေဆိုတာ ကြားဖူးတာပဲရှိတာ.. အခုမှ တကယ်ကြုံတဲ့သူတွေကို တွေ့ဖူးတော့တယ်.. တော်ပါသေးရဲ့  .. အင်းကို ရှာတွေ့လို့ပေါ့နော်.. နို့မို့ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ခြောက်ခံနေရမယ် မသိဘူး..
သတိရနေပါတယ် ကွန်ကောင်းတုန်းလေး အမိအရလာဖတ်သွားတယ်
စာပြန်ရေးလို့ ၀မ်းသာတယ် မကြာခဏရေးပါယောက္ခမရယ်း)
ရှင့်စာလာဖတ်တာ ည ၂နာရီ။ စာဖတ်ပြီး အနောက်သွားမလို့ ခုတော့ကျုပ်ဘယ်လို အခန်းပြင် ထွက်ရပါ့ ။ ထွက်ကျသွားခဲ့ရင်တော့ ရှင်တရားခံနော် ယောက္ခမ
တကယ်ပြောတာ နည်းနည်းလန့်တယ်။ အိမ်မှာ ကျုပ်တစ်ယောက်တည်း ရှိတာတော်။
ညသန်းကောင်လာဖတ်မိတာ မှားပါတယ်အေ။ တစ်ဝက်လောက်ဖတ်နေရင်း မနက်မှ လာဖတ်ရကောင်းမလား စဉ်းစားပါသေးတယ်
ပြီးအောင်ဖတ်လိုက်တော့မယ်လေဆိုပြီး ဆက်ဖတ်လိုက်တာ .. သွားပြီ အခန်းပြင်မထွက်ရဲတော့ဘူးး(
ကလေးမ စိတ်ညစ်စရာတွေ မတွေးရဘူးနော်..ဟင်း ဟင်း..။
ရေလာလောင်းတာ ယွန်းရေ..နေကောင်းတယ်လားယွန်း..မတွေ့တာကြာပေါ့။ ဖုန်းဆက်လိုက်မယ် သိလား..။ နေကောင်းအောင်နေနော်..။
ယွန်းကို ရေလောင်းသွားတယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်လေး ဖြစ်ပါစေ ..